Dainikpost.com- Number 1 Online News, Daily Breaking News, Entertainment News, Sports News, Finance, Technology & videos ‘दोस्रो चरणको निर्वाचन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल’ - Dainikpost.com- Number 1 Online News, Daily Breaking News, Entertainment News, Sports News, Finance, Technology & videos
प्रश्न : स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएको छ, समग्रमा निर्वाचन आयोगका मूल्याङ्कन र समीक्षा कस्तो रह्यो ?
प्रश्न : निर्वाचनमा सरकारबाट कस्तो सहयोग रह्यो ?
प्रश्न : वर्षायाममा निर्वाचन गराउनुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो ?
प्रश्न : निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहेको पाउनु भयो त ?
प्रश्न : आचारसंहिताको पालनामा दलहरुको भूमिका र व्यवहारको कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
प्रश्न : समाचारमाध्यमले निर्वाचनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे, यसप्रति आयोगको धारणा केकस्तो रह्यो ?
प्रश्न : आमसञ्चारमाध्यमले सामाजिक पक्षलाई कतिको ध्यान दिएको पाउनुभयो, यसमा यहाँको टिप्पणी के छ ?
प्रश्न : स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा सबैभन्दा सकारात्मक र स्मरण गरिरहने विषय केही छन् ?
प्रश्न : आयोगले चाहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेका केही विषयवस्तु छन् कि ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सिकेका कुरा, दोस्रो चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो, दोस्रो चरणमा भोगेको अनुभव र सिकाइलाई आगामी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दै जानुपर्दछ । मतगणना छिटो गर्ने, जनशक्तिको प्रयाप्त व्यवस्थापन मिलाउने तथा मतदाता शिक्षामा जोड दिनेजस्ता विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ । रासस
Pm Puspa Kamal Dahal “Prachanda”
साच्चै कृषिमा काम गर्छु भन्नेकालागि अढाई करोडसम्म अनुदान : राणा
मेरो प्रेम अनुभूतिलाई पनि जुईनोले बाँधेको छ : बिनिता बराल (अन्तर्वार्ता र फोटो फिचर)
Nepal’s beautiful ‘veggie seller’ becomes internet sensation